Foto-kevitra ijoroana - PADAP
Ireo hetsika tohanan’ny tetikasa PADAP
Ny tetikasa PADAP dia manohana rantsana roa amin’ireo paikady dimin’ny Drafitra Nasionaly ho an’ny Fampandrosoana na ny PND an’i Madagasikara ny taona 2015-2019. Ny rantsana fahatelo sy fahadimy no tohanan’ny tetikasa.. Ny fahatelo dia ny rantsan’ny PND izay mifantoka amin’ny fanatsarana ny fampiasana ny harena voajanahary sy ny fananana ara-batana mba hampiroboroboana ny fitomboana sy ny fantsom-pivoaran’ny faritra. Ny rantsana fahadimy kosa dia mifantoka amin’ny fiarovana ny renivohitra voajanahary, ny fihenan’ny vokatra ratsy amin’ny fiovan’ny toetr’andro ary ny fanamafisana ny faharetan’ny mponina manoloana ireo loza mety hitranga, sy ireo faritra voakasik’izany.
Ny tetikasa PADAP dia manohana paikady isan-tsokajy eto Madagasikara toy ny fandaharana sektorialin’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (PSAEP); ny lalàna 2015-003, izay mifandraika amin’ny fanavaozana ny satan’ny tontolo iainana Malagasy sy ny politikam-pirenena momban’ny tontolo iainana ho an’ny fampandrosoana maharitra.
Raha jerena amin’ny fomba fijery iraisam-pirenena, ny fomba fiasa PADAP dia mifanaraka amin’ny ankamarohn’ny tanjona maharitry ny fampandrosoana (ODD) ary mifanaraka amin’ny drafi-draharahan’ny Banky iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana eto Afrika.
Ireo fanamby atrehin’ireo tompon’andraikitry ny tetikasa PADAP
Fanamby lehibe no atrehin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny tetikasa PADAP. Ity farany dia mikendry indrindra ny hamela lova fahalalàna lehibe ho an’ny tantsaha monina amin’ireo tontolo kendrena. Miady mafy izy ireo mba hahazoana antoka fa 12 500 ny tantsaha afaka mifehy ireo teknika nohatsaraina ao anatin’ny fotoana fohy.
Ireo mpisehatra amin’ny tetikasa PADAP dia miezaka ihany koa mametraka tontolo iainana tsaratsara kokoa. Perimetatra voatondraka midadasika amina velarana 14 000 hektara no kendrena hovolena amin’izany, ary mbola misy 6 000 hektara ambiny hohatsaraina manokana.
Tsy izany ihany, ny fitsaboana ny lavaka sy ny famerenana amin’ny laoniny ny ala 7 000 hektara dia anisan’ny vinavina izay kasain’ny MAEP ho tratrarina eo anivon’ny tetikasa PADAP ihany koa.